musha nyika dzakabatana Singers Billie Eilish Yevechidiki Nhau uye Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yeAmerican Celeb anozivikanwa se “Billie". Yedu Billie Eilish Yehuvana Nyaya uye Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeinozivikanwa zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika iye zvino.
Ehe, munhu wese anoziva nezve rake rakasarudzika izwi rine tsitsi. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveBillie Eilish's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Billie Eilish Hupenyu Hwepakutanga uye Yemhuri Ngano
Kutanga kuenda, Billie Eilish Pirate Baird O'Connell akazvarwa pazuva re18th raDecember 2001 kuHighland Park muLos Angeles, California. Aive wechipiri pavana vaviri akazvarwa kuna amai vake Maggie Baird uye baba, Patrick O'Connell.
Mugari weAmerica wedzinza chena neChirungu, chiIrish, chiScotland, neBelgian midzi akarererwa kwaakaberekerwa muLos Angeles kwaakakurira nemukoma wake, Finneas O'Connell
Kukura muLos Angeles, Billie Eilish akaona kuti kufarira sei mhuri yake nezve mimhanzi. Munun'una wake anga akuda mimhanzi, amai vake vakanyora nziyo dzakasiyana siyana apo baba vake vaiwanzoridza zviridzwa zvakaita sepiyano. Kuyerera kwemimhanzi mumhuri yake kwakaita kuti afarire uye kwakamukurudzira kuti afambire mberi mumhanzi.
Billie Eilish Dzidzo uye Basa Kuvaka:
Billie Eilish akagadziriswa pamusha kweakawanda makore ake ekutanga, asi izvo hazvina kumutadzisa kutora chikamu mumabasa ekunze. Iye anowanzo kutora chikamu mukutamba mafirimu emumba, uye zvakare anoimba nekutamba chero akawana mukana.
Pakazosvika nguva Billie Eilish aine makore masere, akabatana nekwaya yevana yeLos Angeles. Makore matatu mushure mekujoinha kwaya, Billie Eilish akatanga kunyora nekunyora nziyo. Akagadzirawo nekugadzirisa mavhidhiyo mapfupi achishandisa "iMovie", Apple-yekugadzirisa-vhidhiyo.
Billie Eilish Mugwagwa Wemukurumbira Nyaya:
Sezvo Billie Eilish achiri kuenderera mberi nekutevera zviroto zvake zvekuwana hukuru kuburikidza nemimhanzi uye kuita, iye akatanga kuda kutamba. Akurudzirwa nechishuwo chakasimba chekuita basa rakakura muindasitiri yekuzvivaraidza, akatora makirasi ekutamba achiri mudiki.
Kunyange Billie Eilish aishingairira kuenda kumakirasi ake ekutamba, mukoma wake akanyora rwiyo rwakanzi "Ocean Eyes" iyo yaifanirwa kuratidzwa mune imwe yekutamba kwake. Rwiyo rwacho rwakazove rubudiriro rukuru uye rwakaiswa nevanin'ina pa "Soundcloud" muna 2016 uye rakazoburitswa paRedroom neInterscope Records.
Billie Eilish Rise kune Mukurumbira Nyaya:
Kutevera kubudirira kwekutanga kwake singles "Ocean Eyes", Billie Eilish akaburitsa mutambo wake wakawedzerwa wakanzi "Usandinyemwerere Kwandiri" pazuva regumi nerimwe raNyamavhuvhu, 11 kuburikidza neInterscope zvinyorwa. Mutambo wakawedzerwa uyo une matraki senge "Ocean Eyes", "Bellyache", "Tarisa", yakava yekurara yakarova muUS, kutanga panhamba 2017 paUS Billboard 185, mwedzi mumwe nehafu mushure mekuburitswa.
Achimhanyisa kumberi kusvika parizvino, Billie Eilish achiri anove muimbi akasarudzika anozivikanwa neake akasarudzika manyorerwo uye kunyora rwiyo muUS neake azvino ekutanga studio studio yakanzi "Kana Tose Tichirara, Tinoenda Kupi?". Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Billie Eilish Hukama Hupenyu:
Billie Eilish haasati akaroora panguva yekunyora. Tinokuunzira chokwadi nezve iye kufambidzana nhoroondo uye ikozvino hukama mamiriro. Kutanga nenhoroondo yake yekufambidzana, iye muimbi uye munyori wenyimbo haana chinyorwa chekufambidzana chero murume muhupenyu hwake.
Nekudaro, zvakange zvichitaurwa kuti Billie Eilish aifambidzana naDanielle Bregoli (Bhad Bhabie) mu2018. Mukupindura runyerekupe irworwo, Billie akatumira pikicha yake kuburikidza nevezvenhau nekapepeti kekuti "Handisi kudanana naDanielle y'all benzi ndiye mwana wangu hanzvadzi ".
Nezvehukama hwake panguva yekunyora, Billie Eilish anoita kunge asina kuroora. Izvo hazvireve kuti iye haasi kufambidzana nemunhu chero iye angangoda kuchengetedza hukama hwake hwehupenyu chakavanzika kana angangodaro akamirira kuti munhu chaiye adonane nerudo naye.
Billie Eilish Hupenyu Hwemhuri:
Billie Eilish anobva kune yepamusoro-boka remhuri kumashure. Tinokuunzira chokwadi nezvehupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba vaBillie Eilish:
Patrick O'Connell ndiBillie Eilish baba. Iye akazvarwa pazuva re7th raJuly, 1957 uye anga ari mutambi weAmerica nguva refu pamberi pekuzvarwa kwaBillie. Iye anonyanya kuzivikanwa nemabasa ake mumabasa akadai se "The West Wing", "Iron Man" uye "Mabhasiketi". Aionekwa semumwe weanokurudzira uyo akafuridzira Billie Eilish mukusarudza basa mumhanzi sezvo aigara achiridza zviridzwa zvakaita sepiyano muhupenyu hwake hwese hwepakutanga.
Nezve amai vaBillie Eilish:
Maggie Baird ndiBillie Eilish amai. akaberekwa pazuva re30th yaKurume, 1959 uye mutambi wemuAmerican pamwe nemunyori wenziyo, akataura hunhu, Samara, mu "Mass Effect 2". Akanyora futi nyeredzi mumuvhi "Hupenyu Mukati Kunze" (2013) padivi pemurume wake uye anogovera chisungo chakasimba nemwanasikana wake. maggie aive abatsira mukubudirira uye kubudirira kwemuimbi muimbi.
Nezve hama dzaBillie Eilish:
Billie Eilish ane hama imwe chete. Mukoma wake, Finneas O'Connell, muimbi weAmerica, munyori wenziyo, muimbi, mutambi, uye mugadziri uyo akazvarwa pazuva re30th raJuly, 1997. akarerwa uye achienda kumba kuLos Angeles. panguva iyo Finneas aive nemakore gumi nemaviri, akatanga kunyora nekugadzira nziyo. Akanyora rwiyo rwunonzi "Ocean Eyes" rwunowana Billie mukurumbira wake mu12.
Nezve hama yaBillie Eilish:
Kure kubva kumhuri yapedyo yaBillie Eilish zvinozivikanwa nezve sekuru vake nasekuru nasekuru nasekuru nasekuru. Muimbi haana muzukuru kana mwana wehanzvadzi panguva yekunyora uye hapana zvakawanda zvinozivikanwa nezve babamunini naamaiguru.
Billie Eilish Hupenyu hweMunhu:
Chii chinoita kuti Billie Eilish abike? Gara kumashure apo isu tichikuunzira magadzirirwo ehunhu hwake kuitira kuti akubatsire iwe kuwana izere mufananidzo wake. Kutanga, Billie Eilish's persona musanganiswa weSagittarius zodiac maitiro.
Iye akangwara, anofarira kudzidza zvinhu zvitsva uye ane hunyanzvi hwekugadzira. Zvido zvake uye zvaari kuita zvinosanganisira; kugadzira zvinhu zvakaita sehembe, mota, uye shangu. Billie zvakare ane kabhuku kadiki kaanokora uye anonyora nziyo dzake dzose.
Billie Eilish Mararamiro:
Billie Eilish ane mari inofungidzirwa kuti inosvika madhora zviuru zvishanu panguva yekunyora. Kwakatangira hupfumi hwamhizha zvikuru kunobva mukuyedza kwake kwemimhanzi nekutamba uye zvibvumirano zvinoenderana nemhando dzakadai saCalvin Klien, Prada kutaura mashoma, nepo mashandisiro ake emari achiratidza kuti anorarama hupenyu hwoumbozha.
Kutanga nezvinhu zvaBillie Eilish, ane mota yehumambo yakasvibirira ine madhoo e butterfly. Akange atora pikicha pamberi pemota yake iyo yakavhurwa zvizere ndokutora mufananidzo nekutaura "Akandivhurira".
Kunyangwe Billie Eilish aine huwandu hwakakura hwemari inosvika $ 5 miriyoni, iye achiri kugara nevabereki vake, achirarama hupenyu hwoumbozha sezvo ari mudiki kwazvo kutama kubuda. Muimbi wechidiki ane tarenda anogona kunge akatarisira kutenga imba inodhura sezvaanoenderera mberi mune rake basa.
Billie Eilish Untold Chokwadi:
Kuputira Billie Eilish Yedu Yemwana Nyaya uye biography pano pane zvishoma-zvinozivikanwa kana zvisinga zivikanwe chokwadi chakasanganisika mune yake bio.
Billie Eilish akaberekerwa mumusha wechiKristu kwaakakurira semuKristu.
NYC mukurumbira tattoo muoni Jonboy akaenda ku Instagram ndokugovana pikicha iyo yaakazviti ndiyo yekutanga Billie Eilish tattoo. Iyo tatoo yakaitika kuve siginicha yake yakanyoreswa pasi petsoka dzake, kunyange Billie achiri kuratidza chokwadi chezvaanotaura pane chero pasocial media chikuva.
Billie akakurira aine Tourette syndrome inova chirwere chetsinga chinozivikanwa nekufamba kusingaite uye manzwi anozivikanwa setiki.
Thanks for reading vedu Billie Eilish Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!